अनुहारको चाउरीपन हटाउन चाहानुहुन्छ ? दिनहुँ प्रयोगमा ल्याउनुहोस् यी चिज ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारअनुहारको चाउरीपन हटाउन चाहानुहुन्छ ? दिनहुँ प्रयोगमा ल्याउनुहोस् यी चिज !
अनुहारको चाउरीपन हटाउन चाहानुहुन्छ ? दिनहुँ प्रयोगमा ल्याउनुहोस् यी चिज !
January 10, 2021 admin समाचार 1836
काठमाडौँ । अनुहार र घाँटीमा चाउरी पर्दै जान थालेपछि बुढ्यौलीले छोप्यो भन्ने चिन्ता धेरैलाई हुने गर्छ । चाउरी घटाएर बुढ्यौलीलाई पर धकेल्ने केही घरेलु उपाय यस्ता छन्, जसलाई दिनहुँ प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छः
पाकेको मेवाको पेस्ट बनाएर अनुहार र घाँटीमा लगाउने र १५ मिनेटपछि धुने ।
काँक्रोको पेस्ट बनाएर अनुहारमा लगाई १५ मिनेटपछि धुने ।
पाकेको भुइँकटहरको पेस्ट बनाइ अनुहारमा लगाउने र १० मिनेटपछि धुने ।
दूध पाउडर र मह
एक कप मनतातो पानीमा चार चम्चा दूध पाउडर र दुई चम्चा मह मिसाई अनुहारमा लगाउने र सुकेपछि पखाल्ने ।
कागतीको रस र महको पेस्ट बनाई अनुहारको मसाज गर्ने र १० मिनेटपछि धुने । यसो गर्दा अनुहारको चाउरी हराउँदै जान्छ ।
जैतुनको तेलले पाँचदेखि १० मिनेटसम्म बिस्तारै अनुहारको मसाज गर्ने र त्यसपछि अनुहार धुँदा पनि चाउरी कम हुँदै जान्छ ।
दुई चम्चा नरिवलको तेललाई मनतातो बनाएर अनुहार मसाज गर्ने गर्नाले पनि चाउरी कम हुन्छ ।
पाकेको केराको पेस्ट बनाइ अनुहारमा लगाउने र ३० मिनेटपछि धुने ।
पाकेको गोलभेँडाको पेस्ट बनाई अनुहारमा दलेर १० मिनेटपछि पखाल्ने । यसले पनि चाउरी कम गर्न मद्दत गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका यी साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती ! पुरुषले अबस्य हेर्नुहोस्…
November 2, 2020 admin समाचार 6377
उमेश तामाङ नामका यि युवाको श्रीमती अहिले फरार छिन । बिहे गरेको २ बर्ष पछि १० महिने नानी छाडेर सारा सम्पती लिएर कहा गईन भन्ने अतोपतो छैन । सम्पतीको नाममा भएको अपांग भता र गिलाश
छिमेकी म’हिलासँग स’म्बन्ध राख्न बनाए सुरुङ, अनि श्रीमानले…
December 31, 2020 admin समाचार 1555
काठमाडौं (एजेन्सी)। एक बि’वाहित पुरु’षले एक बि’वाहित छिमेकी महिलासँग स’म्बन्ध राख्न आफ्नो घरदेखि ती महिलाको कोठासम्म सु’रुङ बनाएको खुलासा भएको छ। छिमेकी महिलासँग प्रेम भएपछि ती पुरुषले सो सुरुङमार्फत त्यहाँ जाने गरेका थिए। जब ती
November 30, 2020 admin समाचार 2630
सामाजिक क्षेत्रमा बिभिन्न प्रकारका नकरात्मक गतिबिधि हुदैँ गएका छन् । काेहिले ब ला त्कार गरेका छन् भने कसैले कुनै न कुनै लाप-रबाहि गरेकै छन् । जब ठगहरू ‘गुरुबा’ बन्छन्, व्यभिचारीहरू ‘बाबा’ बन्छन्,धू-र्तहरू ‘माता’ बन्छन्, दुःखी
LEX 18 agenda conversation: Job club (445102)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418668)
Hello world! (345992)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318785)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115323)